Wednesday, September 27, 2006 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Ala na ụlọ bụ ihe adịchaghị na websaịtị, yabụ m na-agba mbọ ịrụ ọrụ nke ọma karịa nke m. Achọtara m obere edemede a Cutline Isiokwu WordPress site na Tubetorial.
Nwere ike ịmepụta ihe omume di na nwunye ozugbo na mpaghara HTML gị nke ga-egosi ma zoo data ka abanyechara ma pụọ. Gbalịa ya na m sidebar ebe ị nwere ike ịdebanye aha maka ndenye aha email na blog.
Site na HTML5, ị nwekwara ike mezuo nke a site na onye na-etinye ebe obibi mmewere:
Iri na ise!
Kwuru na Long Tail na Industrylọ Ọrụ Egwu
Washington State gbara Apple akwụkwọ ikpe maka 'Apple' na 'Macintosh'